Kungakhathaliseki ukuthi impahla kanye isikhundla social iningi labantu cabanga ngendlela ukuphila kangcono. amaphupho Millionaire we bhiliyoni, "kanzima" - nomholo owengeziwe futhi isinxibi - kwasemini okumnandi. Bonke abantu abafani, kodwa cishe bonke abafisa ukuthi bahlezi kanjani ukuba ukhululeke kangcono, futhi umsebenzi nezinsuku - ezithakazelisayo futhi nokuceba nakho ezintsha.
Umuntu ngamunye uye wake wazibuza ukuthi yini edingekayo ukuze siphile kahle. Othile uthola impendulo kokwakhe, ozimisele ukukhokhela imali chwepheshe esilandelayo, enethemba lokuthi ngaphezu kukhona igama eliwumlingo noma iphilisi ethatha ezingasetshenziswa uvuke omunye, bajabule kakhudlwana.
Phila kahle - lena inselele eyinhloko efuna ukugcwalisa zonke izakhamuzi zomphakathi Umhlaba iplanethi, ukuqaphela ngokwabo futhi amakhono abo. Kasibili bonke abantu Abadali wazalelwa futhi babe namakhono athile ukuhumushela lolu umbono ibe yinto engokoqobo. Khona-ke kungani kangaka abanesifiso sokwazi ukuthi ukuphila impilo engcono?
Impendulo isobala: Kufanele uhlole isimo sabo samanje bese uhlole ukuhambisana nemithetho yonke. Yenza kube lula, kodwa abantu abaningi, umphakathi ezabekwa uhlelo kuphela bakhethiwe futhi bambalwa unayo ithalenta iyunithi bangaba yimpumelelo futhi ecebile. Lena akuyona ngakho.
Eqinisweni, kufanele ukukhiqiza "wokubuyekeza" esingavunyelwe aneliseke isimo namuhla, futhi ngingathanda shiya njengoba injalo, noma kancane kangcono. Ngokwesibonelo, umuntu akathandi imali yakhe, ukungabi njalo kwemali yokukhokhela sonke isikweletu sendlu futhi umsebenzi kuyisidina, kodwa unamandla umkhaya omuhle, okuyiwona ukulungele ukushintsha into ezimpilweni zabo.
Ukuthatha Axiom ukuthi umcabango kunodaba futhi ukuphila kuwumphumela umbono ngakho, ungavele 3 izinyanga bonke ngokuphelele ukushintsha, lingaphinde libe ihlukumeza izimiso eziyisisekelo yonke:
Uma abantu becabanga ukuthi mayelana nalokho Awunayo imali eyanele, ngokwenza kanjalo nokuqalisa umthetho phezu ukungabi, nesebenzela uyasigcina isikhathi nsuku zonke. Imizimba umbono ukuthi azikho bazitholele okokuziphilisa.
Umuntu uthi uyakuzonda umsebenzi wakhe, ngaleyondlela ngokwakha isimo lapho waphinda dlula wakhe wokuziphilisa, ukuphika amaphrimiyamu noma inkontileka lesi sikhundla esinemali. Imililo Act enyanya.
Abantu abakholelwa ukuthi zingabantu Okuqukethwe akuzwakali futhi Awunawo ithalente, ngakho ukufa kwakubafanele - umsebenzi onzima behola imali encane, zihlanganisa imithetho efanele. Yini umuntu abona ngokwakhe, kanjalo uyiphile livela kanye nezwe elibazungezile.
Umuntu ugcina okhulumayo ukuthi uzonda umphefumulo wakhe, breaking ukwamukelwa umthetho.
Abantu abenza amaphutha efanayo, baba yizisulu umthetho imbangela nemphumela.
Lapho sifundela umuntu othile okhalazayo njalo futhi zingajabuli ngisho ne umphumela omuhle leli cala, kungukuphula umthetho wokubonga.
Lena akuyona yonke izimiso yonke, kodwa ngokuphula kubo, ungakwazi kuze kube sekupheleni kokuphila kwakhe ezibuza mayelana nokuqala ukuphila okungcono, kodwa akawatholanga impendulo.
Izinguquko uzoqala yaqhuma ngemva umuntu zizoshintsha imikhuba yabo nemicabango engakhi ukuze okuphambene:
Ngisho ne izikweletu ezinkulu kakhulu noma uhlangabezana isidingo ngokwezezimali, abantu kungashintsha izinto zibe ngcono. Nayo imizuzu 5 emva uvuka futhi ngaphambi kokulala ukuthi nsuku zonke nemiholo yabo ikhule futhi sifinyelele ezingeni edingekayo, bona ngaleyo ndlela "Ukuvula" khona umthetho, futhi yonke uphoqelekile ukwakha isimo lapho ulwazi olunikezwe ingqondo enganakile lifezeke.
Hlela ukuthi yini ngempela kufanele kube umsebenzi noma umuntu ibhizinisi izobandakanya ukwamukela umthetho, kucabanga ukuthi kakade owenza nokuthi yini ayithandayo uthola imali edingekayo. Lokhu kungase ukushintsha imigomo indawo ekhona lwebhizinisi noma khuphula nokhetho olufunekayo.
Thumela uhlu amakhono ukuthi umuntu kahle kungashintsha ukuzethemba kwakho, futhi ngaleyo ndlela ukushintsha imibono yabanye bezigabisa. Ngesikhathi esifanayo iqala imithetho efanele.
Ngokuwasebenzisa amaphutha ukucabanga kwakhe okuphambene ezibangele ukuphila okubi, abantu "Ukuvula" umthetho wokutholwa.
Ukuzindla inkinga, udinga ukuba ngifunde ukucela umbuzo yini ngifuna uthole umphumela izenzo zabo. Nge indlela enjalo yokuhlaziya isimo uyohlale umphumela kulindeleke.
Ukuzizwa ukubonga ngisho nje kokuba sengivuswa ekuseni, ungavula komunye wemithetho onamandla kunayo yonke.
Ngo ezintathu nje izinyanga wenziwa njalo nge enganakile ingqondo yomuntu okwaziyo kutsha umcabango yezimpilo zabo, ngisho noma ngaphambi ayecabanga futhi enza ngayo izinto ezingafanele ukuthi sekungamashumi amaningi eminyaka. Ukushintsha amasethingi - yilokhu kusiza abantu ukuba baphile kangcono.
Ngezinye izikhathi, abantu baye bacabange ukuthi ukudala izinguquko ukwazi noma enganakile - kungcono ngendlela emangalisayo onzima ukuthi yilabo kuphela abadla ukwazi ukuthi ukuzindla bese uvala Monologue yakho yangaphakathi. Eqinisweni, kungcono kakhulu ukufunda indlela esikhundleni evamile "slovomeshalka" izilungiselelo ezintsha. Abakwazi ukucula ngisho, futhi ukulandela imicabango engakhi - kuyisihluthulelo sempumelelo.
Ungalindeli imiphumela esheshayo. Ukuntula kwabo amabutho, abantu abaningi baphelelwa ukholo yokuthi lezi zenzo kuzobasiza bakuqonde ukuthi ukuphila okungcono. Kukhona imithetho embalwa ukukusiza ubhekane nalokho kudumazeka:
Okokuqala, kubalulekile ukuba zifunde ukuqaphela buthaka izimpawu zokuqala ukuthi ukushintsha iqala. Abantu balinde izenzakalo ezinkulu okuyinto kakhulu bashintshe ukuphila kwabo, kodwa uma "ku" umthetho imbangela nemphumela, le Amacebo lokuqala kuyoba ngempela ukucasha. Ngokwesibonelo, iklayenti entsha abanquma ukuthi ucabange ngaphambi ubhuka. izindlela zakudala ukucabanga ngokushesha wabhala ngentando yakhe kukho zokwenqaba futhi kungaba esidumazayo, kodwa usizo entsha ukubona ithuba ukuthola ukuthi umthengi ufuna ngempela ukusiza ukwenza into enkulu.
Okwesibili, udinga ukuthatha elinye Axiom ukuthi izwe (yonke) ikhombisile ukuthi wayeyikhathalela njalo. Funda ukuphawule ezintweni ezincane, isibonelo, wamfica ibhasi noma uchungechunge izibani esiluhlaza indlela ukusebenza, lena emamaki ngomkhondo. Inkulumo ethi "umhlaba wami uyangikhathalela" ngemva ngamunye izinto kancane lomuhle kancane kancane ukuphila kuyoba ukudala kuvumelana kwalo futhi kwehlise ingqondo.
Okwesithathu, lokutjengisa emhlabeni (yonke) ngoba konke okwenzekayo kule nkathi ekuphileni, ngisho nabampofu.
Ngokuvamile abantu ephefumulelwe ne impumelelo lokuqala elincane, abasazethembi ngokubheduka izigigaba ezingezinhle. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi bakuphi - ukunkenketha ukucabanga ubudala, nenkathazo kungenzeka okungaphezu kokukodwa izinyanga 3 umsebenzi wedwa.
Guqula isikhala ephilayo
Lokhu kuyindlela elula ukuqonda ukuthi benzeni ukuze baphile kahle. Awunayo ukuthuthela kwelinye idolobha, izwe, ukushintsha flat. Enough khulula baziphilise futhi isikhala ukusebenza kusukela izinto ngaphandle ongakwenza.
Lokhu kuvumela amandla aluka ngokukhululekile, njengoba ekuphileni intando into entsha. Ngezinto ezingadingekile udinga ukudikila, ngoba bengakwazi ukunquma emvelweni yomuntu.
Ngokwesibonelo, ungakwazi ngokuvamile ukuzwa ukuthi abantu balapho Kuye kwaba nezinguquko ezinkulu ngemva besusa TV, enika lezintandane yakhe.
Kukhona ushintsho lokuphila isikhala zibandakanya rearrangement ifenisha, ukulungisa, travel noma umzila omusha ukusebenza - wonke umuntu ekhululekile wazikhethela ukuthi uthanda.
A inqubo enamandla kakhulu ushintsho ukwazi ngezibulo Iziqinisekiso enganakile, uma ukusebenzisa kahle kubo. Kungaba imisho njengoba short nemibhalo elincane eliqukethe kumagama umbono omusha zomhlaba futhi indawo yabo kulo. Abakwazi zisebenze zonke izici zokuphila - impilo, umkhaya imali, ukuvakasha, umsebenzi, impumelelo, nokuningi.
Imigomo yokusetshenziswa Iziqinisekiso:
Kufanele kubhalwe ngendlela enhle. Awukwazi ukusebenzisa kuphika, isibonelo, inkulumo ethi "Angifuni ukulimaza" kufanele kufakwe "Mina ngiyindlela engumqemane," noma "zonke izinsuku ngizizwa kangcono."
Iziqinisekiso kumelwe zivuse imizwelo eyakhayo. ukuphindaphinda Mindless ukuthini inkulumo ethi, is azenziwanga ngangihlushwa umuzwa wokuba injabulo, ngeke zisebenze.
umsebenzi ngamunye kumele sihambisane isitatimende yesithombe okubonakalayo umphumela wokugcina. Ngokwesibonelo, umuntu ufuna ibhizinisi lakhe imali izikhathi 10, khona-ke kufanele ubone ukusakaza isithombe amakhasimende esibonga, ujabule ukuthenga izinsizakalo noma imikhiqizo yalo.
Lezi imithetho eyisisekelo ekubhekaneni isiqinisekiso, uma kwenziwa ezingeni bayazi. Ukuze yethula ku isidingo enganakile bakwazi uphumule futhi uvale Monologue yangaphakathi ukuthi akuwona wonke amandla.
Ngokuvamile, uyakwazi ukuzwa lo mbuzo: "Ngifuna ukuhlala kahle, yini okufanele uyenze ngale" Okokuqala, kudingeka ufunde ukuba adumise ngokwakho futhi ukhuthaze impumelelo ngisho ezincane. Ngokwesibonelo, wenza ekuseni ngokusebenzisa ukushaja amandla - ke kuba yisikhathi ukuba izitike ukuthenga umagazini esizinikezele indlela yokuphila enempilo.
Abantu ngakho ejwayele ngokwabo abahlukumeza futhi ngeze, ngokuba amaphutha angathí sina ukuthi yokudumisa ukukhuthaza isidingo goma njengoba umkhuba omusha. Kodwa ngeke kube sikhokha nge impumelelo ezintsha, ukwandisa ukuzethemba kanye ekuguquleni imibono yabanye ukuze kube ngcono.
Siyabonga nothando - ungamandla amakhulu kunawo wonke, ngawo angenza izimanga. Ukuze ukubonga sesiye wesiko, kuyancomeka ukuba ubhale phansi zonke izinto ezinhle ekuphileni. Lokhu kungaba amehlo nezindlebe, ekusizeni ukuqonda ngokoqobo ezizungezile, umzimba ophilile, ekuseni inkomishi yekhofi kanye nezinye izinto eziningi eziletha injabulo.
Siyabonga ungakwazi nasezinganeni ukugula, njengoba inikezwa abantu ukuba aphinde acabange ngendlela yabo yokuphila futhi uyishintshe.
Technique ekwandiseni Ububanzi bemisebenzi
Ngokuvamile, uyakwazi ukuzwa "Ngifuna ukuhlala kahle," kodwa ngesikhathi esifanayo abantu noma wesaba ukuba ashintshe umsebenzi, ninamathele umsebenzi engathandwa, noma ungazi lapho bangakwazi bona ngokwabo. Lula umsebenzi imishini ukunwetshwa ukwazi. Kumelwe ubhale izindlela 100 ungenza imali.
Kufanele ukhombise lutho, ngisho nalezo ngamabomu wawungeke gone, isibonelo, ngiphakamisa amabhodlela. The main amasu - nokuqaphela yokuthi kukhona izinto eziningi abantu bazimisele ukukhokha imali emhlabeni. Kuyobukeka ingxenye kumsebenzi samanje, futhi mhlawumbe enganakile uzokutshela ukuthi yini ukusebenza futhi siphile kahle. ngakho kuvamisile.
Ukuze izinguquko okufanele sisisebenzise formula siphumelele ekuphileni, "kube + = abanakho." Okokuqala, kudingeka unqume ukuthi kufanele kube impilo entsha, futhi ukwakha isithombe efanelekayo wakhe, khona-ke kube umkhuba imishini ngenhla, futhi kuphela ngemva kokuba sikwazi ukuthola umphumela ngokoqobo. Kunconywa ukuba igama elithi "ufuna" esikhundleni "babe". Lona impendulo yombuzo othi kanjani ukuphila kangcono.
Classical German nefilosofi kafushane (izici jikelele)
Imfundiso yokuziphendukela Egoism okunengqondo: incazelo, ngokuyisisekelo futhi umqondo oyisisekelo
Usuku lokuqala: yini ukukhuluma mayelana nentombazane?